PPST Activities List
PPST Meeting (05/ 2019) held in Chiang Mai, Thailand today
PPST Meeting (05/ 2019) is being held in Chiang Mai, Thailand from 10 to 12 October 2019. General Yawd Serk, the Acting Team Leader of...
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အစည်းအဝေး (၀၄/၂၀၁၉) အပြီး PPST ၏ ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ပြောကြားသည့် နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်း ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အစည်းအဝေး (၀၄/၂၀၁၉)တွင် ပြောကြားသည့် ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်၏ နိဂုံးချုပ် မိန့်ခွန်း၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၅)***********************လေးစားအပ်သော...
The Peace Process Steering Team Meeting (04/ 2019) opened on 21 August as the first day and will be held until 24 August. At the...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်တွင် လာမည့် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ စည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၀၄/ ၂၀၁၉) [Peace Process Steering Team Meeting (04/...
The Statement of Peace Process Steering Team Meeting (03/ 2019)
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ရေးအဖွဲ့အ စည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) ၀၃/၂၀၁၉ အထူးအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇) ရက်။*****************************************************************************************************၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင်...
March 5, 2019.Chiang Mai, Thailand.NCA-S EAO Peace Process Steering Team Meeting (03/ 2019) has been held in Chiang Mai, Thailand from5to6March...
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၀၂/၂၀၁၈) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် [Zawgyi]၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁၁) ရက်***********************************************************၁။ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအ ဖွဲ့အစည်း များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး...
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၀၂/၂၀၁၈) ကို အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ထိပ် သီးခေါင်းဆောင်များ၏ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုဖြစ်မြောက်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ် များကိုရေးဆွဲ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့သဘာပတိဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုး...